छोरीले बाबालाई यस्तो ठाडो प्रश्न गरे पछी !!! तिम्रो विर्यको मूल्य कति हो ? म चुक्ता गर्छु !! मार्मिक भिडियो !! - Enepalese.com
छोरीले बाबालाई यस्तो ठाडो प्रश्न गरे पछी !!! तिम्रो विर्यको मूल्य कति हो ? म चुक्ता गर्छु !! मार्मिक भिडियो !!
इनेप्लिज २०७४ कार्तिक २६ गते ३:४३ मा प्रकाशित
दश बज्न दश मिनेट नै बाँकी थियो । म कोठाको ढोकामा चाबी लगाउँदै थिएँ । मोवाइलको घण्टी बज्यो । ब्यागबाट मोबाइल निकालेर मोबाइलको स्क्रिनमा आँखा दौडाएँ । मोबाइलमा सेभ रहेको नम्बरबाट फोन आएको रहेछ । बाकि भिडियोमा सुन्नु होला :